Gabadha Ilhaan Cumar oo Farriin culus u dirtay Trump | Biyoguurenews.com
Home Wararka Gabadha Ilhaan Cumar oo Farriin culus u dirtay Trump
Gabadha ay dhashay Ilhaan Cumar ee lagu magacaabo Isra Xirsi ayaa sheegtay in ay codkeeda u dhiiban doonto sidii Trump xafiiska looga saari lahaa haddii maamulkiisa uusan qaadin tallaabo xal u ah “dhibaatada wayn” ee isbedelka cimilada adduunka.
Isra Xirsi oo la hadashay barnaamij lagu magacaabo Democracy Now waxaa laga wareystay ololaha 16-jirka ee isbedelka cimilada.
Waxay ka mid tahay da’yar hoggaamineysay dibadbaxa isbedelka cimilada caalamka kaas oo ka dhacay Minneapolis, iyo sidoo kale daafaha caalamka, Jimcihii la soo dhaafay.
Isra oo ayaa wax laga weydiiyay farriintan arrintan cimilada la xiirta ee ay u direyso Donald Trump ayaa sheegtay “in aysan dib uga istaageyn wax qabad la’aan”.
“Madaxweyne Trump, ficilladaada waxay hubaashii dhibaateynayaa dadka. Malaayiin qof oo ku nool dalkan ayey saameeyeen (ficilladaada),” ayey tiri.
“Da’yar ahaan, dadka dib ugama istaagayaan in waxqabad la’aantan ay sii socoto”
Isra waa madaxa fulinta da’yarta dibadbaxa ee isbedelka cimilada adduunka, waxayna wax ka aasaastay ururkaas.
Juwariya Jaamac oo ka mid ahayd hoggaamiyayaasha dibadbaxa isbedelka cimilada ee Mareykanka oo barnaamijka kala qeybgashay Isra waxa ay sheegtay: “Waxaan u baahan nahay madaxweynaha inuu darteen wax u qabto iyo dadka ay saameysay.”
Isra Xirsi ayaa tiri: “Waan sii wadi doonnaa in aan jidadka ku sugnaano illaa wax uun oo isbedel ah laga helayo xafiiskaaga (Trump). Waxaan u codeyn doonnaa in aad guuldareysato sababtoo ah waxaan u baahannahay hoggaamiye wax ka qabto dhibaatadan aan caadiga ahayn.”
Jimcihii la soo dhaafay waxaa daafaha caalamka ka dhacay isu soo baxyo waaweyn oo lagu dalbaday in wax laga qabto dhibaatada isbedelka cimilada adduunka oo la sheegay in ay ka sii dareyso.
Gabdhaha hadallada kulul jeediyay waxaa ka mid ah Greta Thunberg, waxaana hadal hayo dad badan oo caalamka ku kala nool. Waa 16 jir, u dhalatay dalka Sweden, taas oo khudbad qiiro leh ka jeedisay shir looga hadlayay isbadelka cimilada oo ka dhacay Magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Greta ayaa ka hadashay isbadelka ku yimid cimilada adduunka iyo sida hogaamiyeyaasha siyaasadda aany uga go’neyn in wax laga qabto.
Dibadbaxyada waxay ku soo aadeen xilli uu socdo kullanka sannadlaha ah ee Qaramada Midoobeey kaas oo ay ka qeybgalayaan madaxda caalamka intooda badan.
Waxaad xaddeen riyadeydi iyo ciyaalnimadeydi, waxaadna u adeegsateen ballaamo aan ficil lahayn”, ayay ka sheegtay shirka.
“Waxaan mareynaa bilawga burburka, waxa keliya ee aad ka hadleysaan na waa lacag”, ayay tiri Greta.
Urur u ololeeya wax ka qabashada isbadelka cimilada ayaa ka digay in boqolaal milyan oo ruux ay khatar ugu jiraan daadad, marka la gaaro dhamaadka qarnigan.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa u muuqday mid ku jesjeesay gabadha oo waxaa uu sii baahiyay muuqaal laga duubay khudbadii ay jeedisay, wuxuuna ku qoray “waxay u muuqatay gabadh faraxsan oo ka dhowrsugeysa mustaqbal ifaya oo wanaagsan!”.
Previous articleAnigu waantagaya caleemo saarka Madaxwaynaha Juba land, Hawada Somaliya Maaha Tukaano qof leeyahay, Madaxwaynaha Butland o Cambaareeyay Ficilka dawlada xamar